SHEEKADII KUN HABEEN IYO HABEEN qeybtii 40aad. Safarkii afaraad ee Sindibaad iyo markii nolosha lagu duugay. – Filimside.net
Sheekada qeybtii hore waxay noo mareysay markii Sindibaad uu kasoo laabtay safarkiisii sadaxaad isla markaasna uu magaalada baqdaad kusoo laabtay.
Sindibaad ayaa hadalkiisii ku bilaabay;
Kadib waxaan go’aansaday sida caadada ii aheydba inaan safro waxaana diyaarsaday badeecadii aan ku safri lahaa anigoo waliba toogtaan diyaarsaday badeeco ka badan kuwii aan horay ula safri jiray waxaana isku soo shubnay magaalada Basra oo aan uga sii gudubnay Dekeda magaaladaas.
Waxaan kusoo safarnay badii waxaana aheyn kuwa aad u fara badan, sidii aan jidka ugu soo jirnay ayaa habeenkii dambe waxaa na qabsatay dabeel iyo duufaan aad u xoogan taasoo gabi ahaanba qalibtay markabkii aan saarneyn.
Markii uu qalibmay markabkii xooga iyo xawliga dabeesha ku socotay owgeed taasoo caawin xoogan ka heleysay hirarkii xooganaa ee bada ayaan waxaan noqonay qaar badbaaday iyo qaar badii ku maanshoobay.
Waxaan aheyn aniga iyo qaar kamid ah rakaabkii ila socday kuwa ku badbaaday huuri yar oo markabka aasrnaa kaasoo bada kusoo dhacay xiligii uu markabka gadoomayay.
Huurigii yaraa ayaan isku gurney waxaaana bilownay inaan u jiheysano dhankii ay dabeesha inaga jirtay, waxaana jidka kusii jirnay maalin iyo habeen kale anagoo ugu dambeyn imaanay meel jaziirad ah.
Jaziiradii ayaana ku daganay waxa ugu horeeyay ee aan baadigoob ugalnayna wuxuu ahaa rizqi aan cuno maadaama gaajo bas la aheen anagoo bilownay geedihii jzaiirada ka baxayay inaan mirahoodii sida xoolaha oo kale u daaqno ilaa aan caloosha ka buuxino.
Habeenkaas waxaan barinay oo seexanay jaziiiradii, markii subaxii lagaaray ayaan bilownay inaan ku socono jaziiradii dhexdeeda sidii aan ugu wareegeyney ayaan markii dambe aragnay dhisme meel ku yaalo waxaana soo beegsanay halkii dhismaha ku yaalay.
Sidii aan u soo soconay oo ugu soo dhawaaneynay ilaa aan markii dambe kazoo gaarnay, mar alle markaan saas u imaanay ayaa waxaa noo soo baxay oo albaabkii dhismmahaas nagu qabtay askara wada qaawan oo hal dharna wadanin waxayna u ekaayeen kuwa meesha nagu sugayay.
Meeshii ayay nagu qabqabteen ayagoo noo gudbiyay boqorkooda hal erayna ma aysan nagula hadlin waxayna bilaabeen in raashiin iyo cunto kala nooc ah noo keenaan oo horteena ayay soo dhigeen.
Asxaabta intooda badan diif iyo gaajo ayaa ka muuqatay waxay bilaabeen iney cuntadii cunaan lkn aniga ma aanan cunin waayo waxaan maqli jiray in mid kamid ah jaziiradaha ay ku noolyihiin qolo majuus ah oo hilbaha dadka quuta waxayna sameeyaan markii ay dadka qabtaan ayay dharjiyaan oo siiyaan cunto nooc kasta ilaa uu qofka ka cayilo kadibna waxay quud ahaan ugu geeyaan inta qalaan boqorkooda.
Waxaan kale oo maqli jiray in askarta boqorka ay hilibka dadka oo ceyriin cunaan halka boqorka hilbaha loo Karin jiray sidaas owgeed raashiinkii meesha la keenay ma aanan cunin.
Askartii waxay sameeyeen in ay gooni gooni midkasta meel ku xiraan aniga meel gooni ah ayaa la igu xiray maalinkastana waxay ii keeni jireen cunto kala nooc ah laakiin ma aanan cuni jirin maadaama aan ka cabsanayay iney iqashaan oo ay I cunaan.
Waxaan ahaa mid raashiinka wax yar oo naf laheyn ka cuna kaasoo aan nafta ku ceshanaayo si aan gaajo ugu dhiman iyagana waxay ahaayeen maalinkasta midkii noogu roon oo noogu cayilan qala iyagoo qeyb kamid ah hilibkiisa boqorka u dubi jiray halka qeybta soo hartayna ay iyaga ceyriinka ku cuni jireen.
Waxaan galay kurbo iyo murugo dhexdooda waxaana iisii dheereyd cabsi iyo gaajo waxaana noqday mid tabar daran oo aan naf laheyn iyagana maalinkasta waxay ahaayeen kuwa raashiin ii keena.
Ma aysan ila hadli jirin lkn sidoo kale waxay aad ula yaabi jireen qaab muuqaalkeyga iyo siduu jirkeyga isku badalay ilaa ay maalintii dambe asxaabtii ila socotay oo dhan dhamaadeen oo aan aniga kaliya kazoo haray.
Markii aan kaligey soo haray ayay maalinkii dambe ii yimaadeen lkn nasiib wanaag ima aysan qalin ee wey iska key sii daayeen iyagoo cunto isoo hordhigay kadibna iga tagay.
Markii ay iga tageen ayaan meeshii kasoo kacay waxaana bilaabay inaan soo cararo si aan nafteyda ula baxsado waxaana ahaa mid daalka iyo baahida ka badatay maadaama aanan mudo baryo ah waxba cunin.
Sidii aan usoo socday oo marba meel ugu dhacaayay ayaan markii dambe waxaa ii bidhaamay dad meel fadhiyaan waxayna ahaayeen dad asturan oo sida banii aadamka camal u labisan.
Markii aan dadkii meel fog ka arkay ayay farxad isoo gashay waxaan usoo dhaqaaqay dhinacoodii ilaa aan ugu dambeyn agtooda kazoo gaaray.
Waxay ahaayeen dad dagan jaziirada aan joogo mida ku dhagan ayagoo ahaa dadka dhaqan ahaan iyo xadaaro ahaanba ka duwan dadka jaziiradaan ku nool, anigana sidii aan usoo socday ayaan dhexda kazoo galay.
Markii ay I arkeen ayay ila yaabeen sida aan u ekahay una baaba’sanahay iyagoo inta iga naxeen isiiyeen baad iyo biyo waxaana bilaabay inaan cuno si gaajadaan igu raagtay mar uun ii deyso.
Markii aan cuntadii iyo biyihii isku dhameeyay ayay I wareysteen xaalkeyga iyo waxa aan ka qabanaayo jaziiradaan dad qalka ay ku noolyihiin.
Markaas ayaan bilaabay inaan uga waramo xaalkeygii anoo uga soo bilaabay safarkii aan kazoo galay magaalada baqdaad wixii bada nagu qabsaday iyo dhibkii aan kala kulmay dadka jaziiradaan ku nool.
Markii aan hadalka u dhameeyay ayay igu dhaheen anaga waxaan daganahay jaziiradaan mida dariska la ah hadana halkaas ayaan u soconaa hadaad na raaceysid soo bax…………
La soco qeybta 41aad.
Waxaa Aqrisay 1,295